မာရှယ်က ထိပ်တန်းကစားသမားလားလို့မေးမေးပြီး ရယ်ခဲ့တဲ့ ကော်တွိုက်စ်
ဗာတွန်ဂန်နဲ့ အမေးအဖြေကဏ္ဍမှာ ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
ဗာတွန်ဂန်က ယူရိုပြိုင်ပွဲကို ကစားခွင့်လွဲချော်ခဲ့တဲ့ ကြယ်ပွင့်ကစားသမားတွေကို မေးမြန်းခဲ့မှုကို ကော်တွိုက်စ်က ပြန်လည်ဖြေဆိုရင်းနဲ့ ပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ဂိုးသမား ကော်တွိုက်စ်ဟာ လက်ရွေးစင်အသင်းဖော်ဗာတွန်ဂန်နဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အမေးအဖြေကဏ္ဍမှာ ယူနိုက်တက်တိုက်စစ်မှူးအန်သိုနီမာရှယ်ကို ထိပ်တန်းကစားသမားမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဗာတွန်ဂန်က ယူရိုပြိုင်ပွဲကို ကစားခွင့်လွဲချော်ခဲ့တဲ့ ကြယ်ပွင့်ကစားသမားတွေကို မေးမြန်းခဲ့မှုကို ကော်တွိုက်စ်က ပြန်လည်ဖြေဆိုရင်းနဲ့ ပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Pickx Sports အစီအစဉ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးကဏ္ဍဖြစ်ပြီး ဗာတွန်ဂန်က ပါဝင်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမေးမြန်းရာမှာ ကော်တွိုက်စ်က ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဖော် နောက်ခံလူ ဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကို ချက်ချင်းပဲဖြေဆိုခဲ့ပြီး ကျန်ကစားသမားတွေကိုတော့ စဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဗာတွန်ဂန်က ဟာလန်း၊ တာစတီဂန်၊ ဗန်ဒိုက်၊ မွိုက်စ်ကီးန်၊ ပီယာနစ်၊ မာရှယ် စသဖြင့် ကစားသမားနာမည်တွေထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီအခါမှာ ကော်တွိုက်စ််က "အန်သိုနီမာရှယ်? သူက ကြယ်ပွင့်ကစားသမားလား?" လို့ ဗာတွန်ဂန်ကို ပြန်မေးပြီးနောက် နှစ်ဦးသားရယ်မောနေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါဟာ သူ့အတွက်တော့ မာရှယ်က ထိပ်တန်းကစားသမားမဟုတ်ဘူးလို့ ကော်တွိုက်စ်က ယူဆထားပုံရပြီး ပြင်သစ်ကစားသမားအတွက် စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စရာအဖြစ် ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် တိုက်စစ်မှူးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ယူနိုက်တက်အတွက် ခြေစွမ်းပြနိုင်ခြင်းမရှိသလို ဒဏ်ရာပြသနာတွေကြောင့် ရုန်းကန်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာလည်း ခြေစမ်းပွဲနဲ့ ခြေစစ်ပွဲတွေကိုသာ ဝင်ရောက်ကစားခွင့်ရခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲကြီးအတွက် ခေါ်ယူခဲ့ခြင်းမခံခဲ့ရဘဲ ကျန်နေရစ်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း သူ့ရဲ့ ယူနိုက်တက်ကစားသမားအနာဂတ်က ဝေ၀ါးနေပြီး အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေပြီး သူ့ရဲ့အေးဂျင့်ကတဆင့် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းကို ကမ်းလှမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်ထားတယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းက သတင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။